In kasta oo ay diyaaraddu qaadatay sawirro cajiib ah oo ay fududahay in la duulo, waxay ahayd wax xanuun badan in dhab ahaan la dejiyo oo la shaqeeyo. Waxay ahayd inaan galo DJI waxaan u maleeyay codsi iPhone ah, ku xir taleefanka kantaroolaha, iyo ka sii darid gin duullimaad kasta. Haddii aan ku jiray gobol xaddidan, sidoo kale waa inaan diiwaangeliyaa duulimaadkeyga. Waxaan diyaaradda u adeegsaday dersin ama wax ku dhow oo mashruuc ah ka dibna waxaan ka iibiyey macmiilka markii aan dhammeeyey qandaraaska iyaga. Waa diyaarad aan duuliye leheyn, wali wey isticmaalayaan maanta. Kaliya ma fududa in la isticmaalo mana aanan haysan macmiil kale oo macno samaynaya.
Xigashooyinka aan ka helay shaqada waxay ahaayeen kuwo aad qaali u ah… kan ugu hooseeya wuxuu ahaa $ 3,000 si aan uqabano fiidiyow iyo sawirrada 3-da goobood ee shirkadda. Marka la eego wakhtiga wadista iyo ku tiirsanaanta cimilada, taasi ma ahayn cirbixiyeen… laakiin wali ma aanan doonaynin inaan galo kharash noocaas ah.
Waxaan u baxay oo akhriyey faallooyin dheeraad ah khadka tooska ah waxaanan ogaaday in ciyaartoy cusub oo suuqa jooga ahi uu cirka isku shareeray caan ka ahaa, Autel Robotics EVO. Iyada oo shaashad ku dhex jirta koontaroolaha oo aanan u baahnayn in la soo galo, kaliya waan qaadi karaa diyaaradaha aan duuliyaha lahayn, waan duuli karaa, waxaanan qaadi karaa fiidiyowyada iyo sawirrada aan u baahnaa. Waxay leedahay saqaf sare oo ku filan sidaa darteed ma jiro diiwaangelin FAA ama liisan loo baahan yahay si loo duulo. Dejin malaha, ma jiraan fiilooyin isku xira… kaliya daar oo duuli. Waa wax laga cabsado… oo runtii ka qaalisanaa Mavic Pro.
EVO waxay ku faantaa waqtiyada duulimaadka illaa 30 daqiiqo oo u dhexeysa 4.3 mayl (7KM). Intaa waxaa sii dheer, EVO waxay bixisaa astaamo aan badbaado lahayn oo ku ogeysiinaya marka batteriga hooseeyo iyo waqtigii aad ku noqon lahayd guriga.
Waxay ahayd $ 1,000 kii ugu fiicnaa abid ee aan qarash gareeyo… horeyba waxaan ugu soo laabtay maalgashi layaableh iyo macmiil aad iyo aad u faraxsan. Waxaas oo dhan waxaa ugu wanaagsan, uma baahnin wax caqli-gal ah oo ay ku shaqeeyaan gabi ahaanba… kaliya akhri tilmaamaha waxaadna qaadanaysaa tallaallo qumman daqiiqado gudahood. Xitaa waan soo saaray oo waxaan tijaabiyey inaan ka duulayo meel fog… waxayna kusoo laabatay daqiiqado gudahood. Waqti kale, dhab ahaan waxaan ugu duulay geed waana awooday inaan ka rujiyo. Haddana, waqti kale, waxaan u duulay dhinac aqal… si layaab lehna waxyeello uma soo gaadhin. (Whew!)
Xusuusin dhinac ah: Autel ayaa ku dhawaaqday nooca ugu cusub ee diyaaraddan, Autel Robotics EVO II… laakiin wali kuma aanan arag Amazon.
Daah-: Waxaan u adeegsanayaa lambarradayda ku xirnaanta labadaba DJI iyo Amazon qodobkan dhexdiisa.